"I-Punga Lodge" i-Mountain Sanctuary - I-Airbnb
"I-Punga Lodge" i-Mountain Sanctuary
Maungatautari, Waikato, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Peter And Sally
IPunga Lodge iyimizuzu engu-20 SE yaseCambridge 10 mins ukusuka eLake Karapiro, isingathe yonke into kusukela kuRowing World Cups kuya kuHydroplane racing, waterski comps kanye nama-triathalons. Kuqhele ngamaminithi angama-20 ukusuka eHobbiton kanye nokungena kwe-MEI Sanctuary. Ukuhamba ngehora elingu-1 ukusuka eRaglan, eMt Maunganui, eTaupo naseRotorua.
Sihlose ukuhlinzeka ngokuhlala kwangaphandle okuhlanzekile nokunethezekile ngenkathi sijabulela ukubukwa okuhle, ukuthula nokuthula ngenkathi uphumule endaweni yakho yokucasha entabeni ngamathuba amangalisayo okubuka izinkanyezi.
I-Punga lodge ithule kakhulu futhi inokuthula inesitezi esincane esikhulu sokuphumula.Kunamakhabethe angu-2, eyodwa enendawo yokuhlala, ikhishi, umbhede osofa kanye negumbi lokulala elihlukile kanti enye enezindawo zokugezela ezizimele.Imibono ingaba phakathi kwezindawo ezihamba phambili e-Waikato . Khumbula ukuthi lesi sikhala esincane esihlala endaweni engcono kakhulu.
4.75 · 206 okushiwo abanye
I-Maungatautari Mountain ecological sanctuary iyindawo nje yokuphonswa kwamatshe ukusuka endaweni yokulala, noma imizuzu engu-20 ngemoto ukuya endaweni ebiyelwe eseningizimu .I-Waikato River Trails iqhele ngamaminithi angu-15 ukuze uqale futhi ungakuyisa yonke indlela eya e-Taupo. IHamilton Gardens iyimizuzu engama-20 ngemoto futhi iyindawo edume kakhulu ongayivakashela e-Waikato. IHobbiton iqhele ngemizuzu engama-20 kanti iRotorua, iTauranga neRaglan zonke ziyihora ngemoto. I-Karapiro Domain iyimizuzu eyi-10 ukuya esangweni elikhulu.
Ibungazwe ngu-Peter And Sally
Hlola ezinye izinketho ezise- Maungatautari namaphethelo